Malunga nathi -I Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co, Ltd.
Iindleko zezabelo Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co.
I-Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd.yimveliso yobungcali kunye nelithumela kwelinye ilizwe ipaneli yelanga ngaphezulu kweminyaka eli-10. Sigxile ekuyileni, kwimveliso nakwintengiso yeeseli zelanga, iimodyuli ze-photovoltaic kunye neenkqubo zelanga.
I-Apex Solar ine-R & D yobungcali kunye neqela lolawulo, lilandela ngokungqongqo imigangatho yovavanyo yamazwe aphesheya ye-TUV, CE, CEC, CQC, ISO9001, ISO14001. Kwangelo xesha, i-Apex Solar inokubonelela ngemveliso eyenziwe ngokwezifiso kunye newaranti yemveliso yeminyaka eli-12 kunye newaranti yamandla yeminyaka engama-25. Kude kube ngoku, iimodyuli eziphambili zelanga ezibandakanya i-monocrystalline kunye neentlobo ze-polycrystalline zifakelwe iigridi, iinkqubo zegridi kunye ne-hybrid kwiimarike zamazwe aseYurophu, e-Australia, eCanada, eMzantsi Melika, e-Afrika, kuMbindi Mpuma nase-Asiya. Siyakholelwa ukuba iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo kunokuzisa intsebenziswano yexesha elide. Ukwaneliseka kwabaThengi kukuqhubela phambili kwenkqubela phambili.
I-Apex Solar iye yazisa izixhobo zemveliso ezizenzekelayo ukuvelisa iipaneli zelanga ezinokuthenjwa kubo bonke abathengi, umzi-mveliso eVietnam unesikhundla sonyaka se-200MW, amandla emveliso yaseTshayina kwiimodyuli ze-PV ifikelele kwi-600MW ngonyaka, iyonke i-800MW amandla emveliso yonyaka. Kukho inkqubo ye-QC ebanzi ecinga ukuqala ukuya esiphelweni. Zonke izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zivela kubanikezeli beNqanaba 1, zisa iimveliso ezisemgangathweni ezifanayo negama labavelisi bemodyuli yelanga eTshayina ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi.
Ngaphezulu kwamazwe angama-50 aya kuyo
Zonke iipaneli zelanga zenziwe ngamanqanaba eBakala, Zonke izinto ezisetyenzisiweyo ezivela kubathengisi beTier 1
Ngaphezulu kwe-2GW yesicelo sokufaka iimodyuli
Ngaphezulu kokuhanjiswa kwempahla okungu-3GW